देखेको ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ, भगवान प्रत्यक्ष देखिएपछि खोलामा पानीको साटो रगत बग्न थाल्यो - Gorkhali Post
नेपालकै यस्तो ठाउँ जहाँ देवीको मन्दिर नबनाउंदा, ६० जनाको निधन भयो !
चिसोले गर्दा खुट्टाको कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याबाट ३ दिनमै यसरी छुटकारा पाउनुहोस् !
टाइट जिन्स लगाउने युवतीहरू मा बाझोपनको खतरा
कुनै समय भाईरल भएकी सानी समिक्षा अधिकारी १६ सालैमा यति हट ! शिशिर भण्डारीसँग कलेजमै रोमान्स गर्दा गर्दै भेटिईन्
चाउचाउ : छिटो-मीठो खाजा कि मन्द विष ?
संसारलाई चकित बनाउने त्यो विज्ञापन – घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा !
पुलिस रिपोर्ट अब अनलाइनबाटै, घण्टौं लाइन बस्न नपर्ने
२० दिनको सुत्केरी श्रीमती छाेडेर श्रीमान बेपत्ता,दुईवटा बच्चालाई खान दिन सकेको छैन भन्दै रुदै बिजोक
साथीको कपडा मागेर खेल्दाको पीडा : ‘स्वर्ण जितेँ, तर खुसी जितिनँ’
एकजनाले दान गरेको आँखाको नानी ४ जनाका लागि यसरी हुन्छ तयार
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/देखेको ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ, भगवान प्रत्यक्ष देखिएपछि खोलामा पानीको साटो रगत बग्न थाल्यो
देखेको ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ, भगवान प्रत्यक्ष देखिएपछि खोलामा पानीको साटो रगत बग्न थाल्यो
1744minutes read
भिडियो अन्त्यमा छ ।। अवश्य हेरेर सेयर गर्नुहोस नत्र तपाईको जिवनमा ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ ।।
यो पनि पढ्नुहोस: तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्।
भारतका प्रख्यात उत्प्रेरक विवेक बिन्द्राले २०७५ माघ ४ मा सबैभन्दा अस्थिर सरकारको नाम राखेर एउटा भिडियो युट्युबमा राखे। उक्त भिडियो रातारात भाइरल भयो। धेरै नेपालीलाई उक्त भिडियोमा भएका धेरै कुरा सत्य छैनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन रातारात फैलियो?
यसको कारण, उक्त भिडियोको आकर्षक फोटो चित्र हो, जसमा लेखिएको थियो- ‘नेपालमा १७ वर्षमा १७ प्रधानमन्त्री बदलिए।’
उनलाई धेरै नेपालीले धन्यवाद पनि दिए। मलाई भने एउटा प्रश्नले घोच्न थाल्यो- के नेपाल बन्दै बन्दैन त?
हामी नेपालीले दुनियाँका सबैभन्दा पछिल्लो विकासको लहर देखेका मात्र छैनौं, आफ्नै रगत र पसिनाले बनाएका पनि छौं। कतारका रंगशालादेखि चीनका पूर्वाधारमा समेत हाम्रो सीप र ज्ञान र मेहनत फैलिएको छ। धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरू उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादनमा लागिपरेका छन्। मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लगाएका छन्। तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। पूरा हुन नसकेका आशा र त्यसले उत्पन्न निराशाका मुख्य कारण हाम्रै सरकारहरूको अकर्मण्यता हो। त्यसपछि हामी नागरिक।
केही दिनअघि प्रदेश ३ का एक मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, ‘अहिले जनतामा साह्रै निराशा छाएको छ। जे गरे पनि सरकारले राम्रो गर्दै गर्दैन र गर्नै चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। राम्रो कामको चर्चा कसैले गर्दैन, नराम्रो काम मात्रै भाइरल हुन्छ।’
हामी जनतादेखि मन्त्रीसम्मलाई यस्तो निराशा छाएको छ, जसले देशमा कुनै सम्भावनै छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। आउनुहोस्, आज केही सम्भाव्यताका कुरा गरौं, केही आशाका कुरा गरौं। हरेक देशका आफ्नै समस्या हुन्छन्। दोश्रो विश्व युद्ध सकिएपछि जर्मनीले कसरी आफ्नो विका़सको सुरूआत गर्यो? जापानले कसरी तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उठायो? के नेपाल पनि कुनै चामत्कारिक विकासको बाटोमा दौडिन सक्छ? मेरो विचारमा, नेपाल विकासको बाटोमा लाग्न मात्र होइन, चामत्कारिक विकासको बाटो नै समात्न सक्छ। हामी नेपालीहरू मिल्यौं भने, आफ्नै नंग्रा खियायौं भने नहुने केही छैन।
दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएको तीन वर्षसम्म जर्मनीमा राष्ट्रिय सरकारसमेत थिएन। जापानको हालत त्यस्तै कमजोर थियो। अहिलेको दुबई, कतारमा खाने अन्न थिएन। हामीले केही साना कुरा मात्र ध्यान दिने हो भने निकै छिटो प्रगति पथमा लम्कन सकिन्छ। विकासको सबैभन्दा ठूलो श्रोत भनेकै सरकार हो। तर सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन। सरकारले सरोकार वालाहरूका बीचमा समन्वय गर्ने हो, सजिलो बनाउने हो। रुवान्डालाई हेरौं। सन् १९९० दशकमा रुवाण्डामा शताब्दीकै ठूलो नरसंहार भयो। सय दिनमा झन्डै १० लाख मानिसले ज्यान गुमाए। तुत्सी समुदाय झन्डै सखाप भए। त्यसपछि बनेको पास्टर बिजिमुन्गुको सरकारले सन् २००३ सम्म केही गर्न सकेन। समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे। निराशा र अन्योलबीच पास्टरले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि आएको पल कागामेको सरकारले ‘भिजन २०२०’ को अवधारणा ल्यायो। उक्त अवधारणाअनुसार रुवान्डालाई २० वर्षमै रुपान्तरण गर्ने योजनासहित जम्मा ४४ स्पष्ट उद्देश्य अघि सारिएका थिए।
पल कागामे सरकारका कतिपय कुरा अनुकरणीय नभए पनि सरकारको चुस्त सेवा र विकासको कामको अनुसरण नेपालले गर्न सक्छ। अहिले कुनै पनि विदेशी लगानी रुवाण्डामा गर्नु परे जम्मा २ दिनमा सबै काम सकिन्छ। विकास र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने रुवान्डाको अर्थतन्त्र विश्वकै तीब्र गतिमा बढिरहेको छ।
नेपाल सरकारले पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य लिनु जरुरी छ। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारले खासै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। अहिलेको सरकारले मात्र चार काम गरोस्: भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, चुस्त सेवा, पूर्वाधार विकास र रोजगार सिर्जना।
जनताले देख्ने समस्यालाई नदेखेजस्तो गरेर समस्या नै छैन भन्नु सम्पूर्ण जनताको अपमान गर्नु हो। भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। जहिले जसले जहाँबाट सोधे पनि एउटै जवाफ कि त अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ कि त अनुसन्धान गर्छु भन्नेबाहेक केही नसुनिनु सुखद होइन।
हरेक वर्ष भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपालले नाम लेखाउँदै छ। सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छ तर खोई आयल निगमका जग्गा काण्डका दोषीलाई कारबाही गरेको? खै वाइड बडीका दोषी? कहाँ गए मेलम्चीका ठेकेदार? किन अख्तियारकै आयुक्तले घुस मागेको भिडियो बाहिरिँदा समेत पक्राउ परेनन्? सामान्य कर्मचारी भएको भए यति घुस रकमसहित रंगेहात भन्दै सोही दिन पक्राउ पर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको म केही गर्दिनँ तर मेरा आफ्नाले गरेको हेर्दै हेर्दिनँ भन्नुभएको पक्कै होइन होला। लाखौं नेपालीलाई घोच्ने गरी स्विस बैंकको काण्ड आयो, सरकारमा बसेकालाई घोचेन। वाइडबडी काण्ड भयो। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उक्त खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको र भ्रष्टाचार भएको समाचार आए तर नेपालमा अख्तियारले एक जनासमेत दोषी देखेन। उल्टो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत चुपचाप भयो, घटना सामसुम भयो। त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टका जग्गा भाडाको कुरा, ३३ किलो सुनको कुरा, दैनिक पत्रपत्रिकामा आउने अर्बौं सडक निर्माणमा भएका अनियमितताका कुरादेखि बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेसम्मका घटनामा चलखेल भएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भने कारबाही गर्न कस्ले रोकेको छ?
भ्रष्टाचारको जालो यहाँसम्म छ, भ्रष्टाचारको विरोध गरेर अख्तियारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विवेकशील साझा पार्टीका पाँच जनालाई कार्यालयको ढोकासम्म पनि जान दिइएन। भ्रष्टाचार कारबाहीको त कुरा छाडौं, भ्रष्टाचार भयो भनेर सम्बन्धित निकायसम्म जान पनि नपाइने?
सरकारले साँच्चै जनताको विश्वास जित्ने हो भने पहिला ठूला भ्रष्टाचारीलाई समाएर जेल हाल्नुपर्ने हो। विश्वका धेरै राष्ट्रले लागू गरेको आम्दानीअनुसारको मात्र खर्च गर्न पाउने र सबै ठूला खरिदमा आम्दानीको श्रोत खुलाउने व्यवस्था गर्न सके मात्र पनि निकै सम्हालिन्थ्यो भ्रष्टाचार।
मासिक ३५ हजार आम्दानी हुने जोकोहीले ४० लाख आनाको मूल्य पर्ने जग्गा खरिद कसरी गर्छ? ६० लाखको सवारी कसरी चढ्छ? अनि बैंक वा सहकारीमा लाखौँ जम्मा कसरी गर्छ? अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर निर्दोष साबित गरेपछि कसरी घट्छ भ्रष्टाचार? आम्दानीको स्रोतभन्दा बढीको खरिदमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै जनता देखासिकीको चपेटामा पनि पर्ने थिएनन्, भ्रष्टाचार पनि कम हुने थियो। सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, यो काम तपाईंकै कार्यालयबाट सुरु गर्नुहोस्।
सरकारको अनुभूति सरकारी सेवाबाट थाहा हुन्छ। प्रदेश सरकारदेखि जनतासम्म सबै निराश भएको अवस्था छ। सरकारलाई कसरी चुस्त बनाउने, सरकारी बजेट कसरी खर्च गर्ने, स्थानीय निकायको कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेकै छैन। कुनै तयारीबिनै परियोजनाहरू घोषणा भएका छन्। जनतालाई राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले घर घरमा ग्यास, पानीजहाज, भू-उपग्रह लगायत परियोजनामा काम सुरू गरेको छ। जनताको प्रश्न छ- ‘किन चाहियो हामीलाई पानी जहाज? सरकार सक्छौ भने जनचासोका विषयमा पहिला ध्यान देऊ। हामीलाई पहिला जे चाहिएको छ त्यो देऊ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै सरकारसँग सन्तुष्ट भएका छैनन्। काम गर्न दिएनन् भन्ने सुनिन्छ। प्रदेश या स्थानीय निकायको संरचना ठिक छैन भने मिलाउन लाग्नु पर्यो। दशकौंअगाडि विदेशी सहयोगमा बनेका ट्राफिक बत्तीहरू बिजोग अवस्थामा छन्। कोटेश्वरबाट रत्नपार्कसम्मको बाटो चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरीको मुडअनुसार पर्खनुपर्ने अवस्था छ। कहिलेकाहीँ एक घण्टा नै लाग्छ। कोटेश्वर, जडिबुटी, कलंकी, थापाथलीको जाम तपाईंलाई थाहा छ कि छैन?
सरकारी कार्यालयका अवस्था पनि उस्तै छन्। चुस्त सरकारी सेवाका लागि के कस्तो सुधार हुनु पर्छ? के गर्नु पर्छ? खै सुरुआत? मालपोत, नापी, कृषि, मन्त्रालय जता गयो उतै समस्या उस्तै छ। बिनापैसा र बिनाचिनजान कि त बिनाबिचौलिया काम गर्न नसकिने अवस्था किन अझै सुध्रिन्न? सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, सडक, वातावरण, आयात, निर्यात जताततै केही राम्रा काम गर्ने अवसर छन्। जनताले गरेको आशा र तपाईंले दिनुभएको वचन राख्ने अवसर पनि हो यो। हुम्ला, जुम्लाको कुरै छोडौ काठमाडौमा सरकार भेटिदैन।
शिल्पाले डिभोर्स मागे पछी खेल सुरु भयो,विवाहा गर्ने गराउने सबैलाई कारवाही हुने[भिडियो हेर्नुहोस ]
मेरी छोरीलाई देखेर सब डराउछन हास्छन,८२ बर्षे आमा र छोरिको अन्तर्वातामै रुवाबासी(भिडियो सहित )
ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रीको भबिष्यवाणी रवी १८ दिन भित्रमा धरौटीमा रिहा, सिधाकुरा जनतासंग ३ महिना बन्द (भिडियो हेर्नुहोस )
वृद्धभत्ता जम्मा गरेर धर्मशाला निर्माणमा गर्ने ८५ वर्षीय हजुर बुवालाई सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !